Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Dhaawac intee le’eg buu Xasan Sheekh u geystay rajadii laga qabay dowlad soomaaliyeed oo shaqeysa ?‏
Dhaawac intee le’eg buu Xasan Sheekh u geystay rajadii laga qabay dowlad soomaaliyeed oo shaqeysa ?‏
Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa la doortay mudda haatan laga joogo ku dhawaad sedex sano ah, Isagoona markaasi loo dhiibay dowlad federaal oo rasmi ah (aan kumeelgaar ahayn), Taas oo loogu talo galay in ay shaqeyso muddo afar sano ah, ka dibna ay dalka ka qabata doorasho xor oo uu qof walbaaba uu dhiibanayo codkiisa. Dowladdan, ayaa ah dowlad leh dastuur tilmaamaya dhamaan shaqooyinka loo baahan yahay in la qabto intaanan la gaarin sanadka 2016, halkaasi oo la filayo in ay dhacdo doorasho noocey rabtama ha noqotee.
Maadaama wax kasta lagu cadeeyey gudaha dastuurka, Waxa ay ahayd shaqada Madaxweynaha oo kaliya in uu magacaabo ra’isul wasaare karti leh, iyo gole wasiiro oo tiro ahaan iyo tayo ahaanba qaban kara shaqada loo igmaday dowladda uu madaxweynaha ka yahay Inta aysan dhamaanin mudada afarta sano ah ee ay xilka haynayaan. Waxaa sidoo kale Madaxweynaha looga baahnaa in uu noqdo qofka ugu horeeya ee ilaaliya sharciga iyo habsami u socda howlaha dowladda, maadaama uu isagu yahay shaqsiga u sareeya ee dalka, waaba haddiiba la fahamsan yahay dowladnimo iyo dhaqankeede.
Waxaa sidoo kale Madaxweynaha looga fadhiyey in uu noqdo qof u dhaxeeya dadka, islamarkaana u taagan saxidda wax alaale iyo wixii ka qaldan hay’adaha dowladda iyo guud ahaan siyaasadda ay ku socoto dowladdiisa sida uu Dastuurkuba tilmaamayo, Si ugu danbeyn loo helo dowlad Soomaaliyeed oo shaqeysa. Hadaba Xasan Sheekh ma ka soo baxay shaqadii looga fadhiyey ? Haddii ay jawaabtu maya tahay dhaawac intee le’eg ah buu u geystay rajadii laga qabay dowlad soomaaliyeed oo shaqeysa ?
Runtii waxaan oran karaa Xasan Sheekh kama uusan soo bixin dhamaan shaqooyinkii looga fadhiyey iyo wax u dhow toona, Bal waxaa wax walba ka daran dhaawacii uu u geysatay rajadaii la qabay, halka uu dhinaca kalena sabab u noqday mishaakilaad hor leh oo aan horay u jirin Isaga ka hor sida soo noqosahada colaadda sokeeye, Taas oo ay horay u aastay saxwaddii islaamiga ahayd ee dalkan ka hanaqaaday, halka u kala duumashada dowladaha dariska ahna ay siyaaday.Anigu, waxa aan isweydiiya sida ay ugu suuragasho nimankan Islaamiyiinta ah sameynta nabad deg deg ah iyo ciribtirka qabyaaladda ka dhexjirta bulsho weynta Soomaaliyeed. Bal fiiri Maxkamadihii Islaamiga ahaa, Waxa ay nabad ku keeneen aan horay loo arag muddo ka yar lix bilood. Bal fiiriya Al-shabab ma arkeysid labo beeleed oo ku dagaalamayo deegaan ay maamulaan. Wali ma maqasheen dagaalyahanada Al-shabab oo hab beeleed u dagaalamayo ? Hodhowna waxaa lagu leeyahay maxay Shacabku noo taageeri la’yihiin, oo ay uga cararaan magaalooyinka aan ku soo socono.
Xasan Sheekh, Waxa uu ku guuldareysay markii horeba soo magacaabista ra’isulwasaare ka bixi kara waqtigan adag ee lagu jiro oo runtii u baahan qof karti leh, Islamarkaana daacad u ah dalkiisa iyo dadkiisa sida Farmaajo oo kale, kaas oo ku qabta dhamaan shaqooyinka loo baahan yahay in la qabto mudadaasi afarta sano ah. Xasan in uu ra’isulwasaare fiican keena iska daye, Waxa uu dib u soo celiyey shaqsi horay u soo fashilmay, islamarkaana ku eedeysan in uu gacan geliyey dhul-badeedkeena. Taas oo ku tusineysa nuxur-xumidiisa.
Sidee u soo magacaabaysa shaqsi aan karti lahayn, islamarkaana galay khiyaamo qaran ? Sideese xil intaasi le’eg ugu aaminaysaa qof horay u soo fashilmay oo hadana ku socdaa siyaasadihii uu ku fashilmay mise waanba la doonaynin qof wax qabta oo dhibaatada ka saaro dalka iyo dadka ? Xasan, Waxa uu sidoo kale ku guuldareysay in uu la yimidaado siyaasad cad oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira haday ahaan lahaayeen xagga aminiga, dhaqaalaha, siyaasadda, caafimaadka iyo waliba arimaha dib-u-heshiisiinta.Xasan, Waxa uu ku fashilmay, Islamarkaana uu indhaha ka qabsaday ku tumashada Sharciga ee ku dhexbaahay Hay’adaha Dowladda hadaan isaguba taageerin, gaar ahaan marka ay timaaddo dhismaha maamul goboleedyada. Tusaale ahaan, Waxa auu taageeray dhismaha maamulka Galmudug oo aan waafaqsaneyn dastuurka dalka u yaallo, kaas oo si cad u tilmaamayo shuruudaha laga rabo maamul goboleedka. Bal idinkaan idin weydiiyeye imisa gobol ayuu ka kooban yahay maamulka Galmudug ? Ma gobol iyo bar mise labo gobol ?
Sidee buu u taageeri karaa maamul aan waafaqsaneyn Dastuurka dalka, Isagoo waliba sheeganayo aqoonyahan wax ka yaqaano siyaasadda ? Midda kale, hadaanu Isaga sharciga ilaalinin yaa ilaalinayo ? Mase aragteen madaxweyne noocaan oo kale ah ? Waxayaabaha aanu ku aragnay Xasan Sheekh ma’ahan runtii wax caadi ah oo la aqbali karo. Ma’ahan markan markii ugu horeysay ee uu sharcidaro taageero, ee waxaa uu horay u taageeray rawaayadihii ay Itoobiya ku jishay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, halkaas oo ay ka soo baxaeen labo maamul oo Iyada hoostaga.
Xasan, Waxaa uu sidoo kale lumiyey dhexdhexaadnimadii laga doonayey madaxweyne qaran. Tusaale ahaan, waxa uu u kala hiiliyey siyaasiyiintii isku haysay maamulka koonfur galbeed, iyo waliba kuwii isku hayey magaalada Kismaayo. Sow ma’ahayn in uu Isagu dhexdhexaadiyo kooxahaasi inta ay Itoobiya dhexdhexaadin lahayd, maadaama uu Isagu sheeganayo in uu madaxweyne ka yahay dalkaasi. Sidese ku dhacday in uu taageero heshiishkii sharcidarada ahaa ee lagu saxiixay magaalada Adis Ababa, Kaas oo ahayd haddiiba wax la heshiisiinayo in la heshiisiiyo kooxihii ku dagaalamay magalada sida Barre iyo Axmed Madoobe oo kale.
Xasan, Waxa uu goob cidla ah uga tagay, Islamarkaana uu rabitaan la’aan u muujiyey dadkii u heelnaa midnimada iyo wadajiraka soomaaliyeed, halka uu qiimeyn iyo qadarin aan loo baahneyna siiyey kuwii horseedka u ahaa dhibaatadan maanta taagan, haaatanna diyaarka u ah sidii ay u kala googoyn lahaayeen dalka, Iyagoo fulinayo balamihii ay ka soo qaadeen Itoobiya xiligii ay jabahdda ahaayeen. Waa dal ninka xun la ixtiraamo, halka ninka fiicanna la bahdilo !
Dhaawacyada uu ninkan geystay ma’ahan runtii kuwa lagu soo koobi kara hal qorme, labo qorme iyo waliba sedex qorme, maxaa yeelay waa kuwa aad u tiro badan, laakiin dhibaatada ugu weyn ee uu geystay ayaa ah ogolaanshaha uu ogolaaday soo noqoshada ciidamada Itoobiya ee aan sharcigu qaban. Waxa uu sidoo kale dalkii u gacan geliyey dowlado cadow ah oo gashan shaatiga Igad. Waxaana taasi marqaati u ah wixii qabsaday maamulkiisii ugu magacawnaa gobolka Gedo, halkaasi oo inta xilkii laga qaaday hadana la soo musaafuriyey !
Hogaamiyahan faashilka ah, Waxa uu siidoo kale ku guuldareystay ilaalinta dadka rayid ah ee madaxweynaha u yahay, Kuwaas oo dhibaato joogta ah kala kulma shisheeyaha ku sugan dalka, gaar ahaan ciidamada Itoobiya ee aan aqoonin ixtiraamka xuquuqul insaanka. Inta uu Xasan Sheekh madaxweynaha ahaa, Waxaa dalka ka dhacay dhibaatooyin badan oo soo gaaray muwaadiniin soomaaliyeed, sida kuwii lagu xasuuqay magaalada Marka, iyo deegaanka Halgan oo kale, Kuwaaas oo uusan xitta ka tacsiyeynin dhibkii soo gaaray iskabadaaye in uu wax u qabto’e.
Marka aad la sheekeysato dadkii la soo sheeqeeyey Xasan Sheekh iyo kooxdiisa, Waxa ay kuu sheegayaan waxyaabo badan oo aad la yaabto, sida musuqmaasuq baahsan, ku takrifal awoodeed iyo waliba safaro aan dhamaad lahayn. Dhanka in wax la cadeeyo marka ay timaado Madaxweynuhu ma’ahan nin wax kala cadeeya. Tusaale ahaan, Waxaa dhowr jeer la weydiiyey qeybta waqooyi ee gobolka Mudug ma waxa ay ka sii tirsanaaneysa Buntland mise Galmudug ?
Jawaabtu waxa ay noqotay runna ha sheegin beenna ha sheegin wax aad sheegtana ha waayin. Mar kale, waxa la weydiiyey go’aankii ka soo baxay Baarlamaanka Federaalka ee ku aadaanaa Baarlamaanka Jubba ee la kala diray. Jawaabtu waxa ay noqotay hadal tiro badan oo aan kala cadeyn. Wali ma’aanan arag madaxweyne ka warwareegayo fulinta go’aano ka soo baxay Baarlamaanka dalkiisa oo waliba ah kii Isaga soo doortay. Dowladnimoy xaal qaado.
Markaan hadalka soo uruuriyo Xasan Sheekh, Waxaa uu runtii dhaawac weyn u geeystay rajadii laga qabay dowlad Soomaaliyeed oo shaqeysa, Waana sababtaasi sababta maanta looga keenay mooshinkan ay dabada ka riixayaan saaxiibadiisii hore. Tusaale ahaan, ma jirto siyaasad wax-ku-ool, oo wax ka qabata dhibaatooyinka maanta dalka ka jira. Ma dhisna ciidan qaran oo la wareegi kara talada dalka. Mishaar lama qaadan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Ma dhisana hay’ado dowladeed oo shaqeeya. Lama hayo lacag lagu badalo kunkan shilin ee sii dhimanbayo.
Ma jirto siyaasad arimo dibadeed oo la tilmaami kara. Ma jiro dadaal muuqda oo ku wajahan dib-u-heshiisin iyo joojinta dhiiggan daadanayo. Lama hayo siyaasad ku aadan dowladaha dariska iyo faragelintooda guracan. Ma jirto cadaalad iyo sinaan, dhexdhexaadnimo warkeedba dhaafe. Lama hayo siyaasaddii lagu maamuli lahaa kheyraadka dalka, waaba hadanaan shisheeye loo gacan gelinine. Hogaanka Xasan waa fashil iyo dib-u-dhac aan dhamaad lahayn.Gaba gabadii iyo gunaanudii, Waxaan qabaa in la joogo xiligii uu xafiiska baneyn lahaa, si loo helo isbadal dhaama kan maanta ka jira Villa Soomaaliya. Waxaan qabaa joogistiisa uu maanta Villa Soomaaliya joogo in ay tahay waqti-dhumis, iyo in ay sii dhimato rajadii yareyd ee soo bidhaamaysay. Hadaba waxaan ugu danbeyn u soo jeedinayaa dhowr talo aan isleeyahay waa kuwa loobaahan yahay waqti-xaadirkan, si dalkan loo badbaadiyo, Islamarkaana loo gaaro halkii la tiigsanayey, waayo Xasan ma’ahan nin keeni kara isbadalkii loo baahnaa.
3-In jagada ra’isulwasaaraha loo dhiibo ku xigeenka Cumar Cabdirashiida (Maxamed Cumar Carta), si uu u sii wado shaqada hadda socota.4-In Gudoomiyaha Baarlamaanka uu la wareego xilka Xasan sheekha inta ka dhiman afarta sano ee loo igmaday Dowladdan.
Daawo Sawirada Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed Oo Kormeer Ku Tagey Deegaano Ka Tirsan Gobolka Sh/H
Daawo Sawirada AMISOM oo Ciidamo isugu jira rag iyo Dumar u tababareysa Maamulka Koonfur Galbeed